कतै अल्सर त भएको छैन ?मुख्य लक्षण यस्ता हुन्छन - Nawalpur Dainik
कतै अल्सर त भएको छैन ?मुख्य लक्षण यस्ता हुन्छन
March 30, 2021 by Nawalpur Dainik
लामो समयम्मको ग्यास्ट्रीक समस्याले अन्त्यमा अल्सर अनि क्यान्सरसमेत गराउँछ । दैनिक खानपान, व्यस्थ जीवनशैली र स्वस्थ्यको लापरवाहीले ग्यास्ट्रीकको समस्याले धेरैलाई आक्रान्त पारेको छ । ग्यास्ट्रीकको समयमै उपचार नगर्दा र लामो समयसम्म यसको असर पर्दा अल्सर हुनसक्छ । अल्सर भए नभएको कसरी पत्ता लगाउने त
जान्नुहोस् अल्सरका लक्षणहरुः
-खाना खाएको १/२ घण्टा पछि या रातको समयमा पेटको माथिल्लो भाग या बिच तिर जलन जस्तो भएर दुख्छ भने त्यो अल्सरको संकेत हुनसक्छ ।
-खाना खाएपछि या अरु बेला पनि बान्ता आईरहन्छ भने पनि अल्सरको लक्ष्मण हुनसक्छ ।
-प्रायः जसो पेट फुलीरहन्छ भने पनि अल्सरको संकेत हुन सक्छ ।
-तल पेटको ग्यास बिस्तारै खाना नलि हुँदै माथील्लो भागमा आउँदा छाती वरीपरी पोलेजस्तो भएमा पनि सम्झनुहोस् कि तपाइँलाई अल्सर भएको हुनसक्छ ।
-सावीकको खाना खाईरहँदा नै तपाईको तौल घट्दै गईरहेको छ भने पनि चुप नबस्नुहोस् ।
-पेट दुखीरहनु केही खाएपछी दुख्न शुरु गर्नु अल्सरको संकेत हुनसक्छ ।
-छिटोछिटो भोक लागीरहनु पनि अल्सरको कारण हुन सक्छ ।
-लामो समयसम्म कालो दिशा भईरहेको छ भने यो अल्सरको कारण हुने ब्लिडिङले भएको हुनसक्छ ।
नेपाल समूहले पनि मुख्यमन्त्री शाहीको साथ छोड्ने संकेत
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पनि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई साथ दिँदै आएका नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समुहका सांसदहरुले पनि साथ छोड्ने तयारी गरेका छन् । चैत ४ गतेको एमाले संसदीय दललाई नेपाल समुहले ‘गुटको बैठक’ भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई आफुहरुको समर्थन कायमै रहेको बताएको थियो ।
अब पहिलेको जस्तो अवस्था रहेन्, नेपाल समुहका सांसद सुशील थापाले भने, सरकारलाई समर्थन गर्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं । नेपाल समुहका सांसदहरुले चैत ४ गतेयता कानुनका जानकारहरुसँग १० जनाको उपस्थितिमा भएको दलको बैठकको बैधानिकता सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको निर्णय र अहिलेको सरकारलाई आफ्नो समुहले समर्थन कायम राख्दा हुने जटिलताका विषयमा छलफल गरेका थिए ।
सांसद थापाले मुख्यमन्त्री शाहीलाई २०७४ फागुन ४ गते नेकपा एमालेले दिएको समर्थन फिर्ता लिने दलको निर्णयलाई सबैले समर्थन गर्ने पनि बताए । दलको बैठकले समर्थन फिर्ताको निर्णय गरिसकेकाले यसलाई टुङ्गोमा पु¥याउँछौं उनले भने, अव कर्णालीमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्छ । उनले पार्टीकोतर्फबाट सरकारका रहेका मन्त्रीहरुले चाँडै राजीनामा दिने पनि बताए । ‘एक साताभित्रै दलको बैठक बस्छ, १९ जना सांसदहरु उपस्थित हुन्छौं उनले भने, ‘एमालेकोतर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले पनि राजीनामा दिनुहुन्छ ।
नेपाल समुहका अर्का सांसद अम्मरबहादुर थापाले आफुहरुले केन्द्रको निर्णय पर्खिएको बताए । उनले अब बस्ने दलको बैठकमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको विषयमा पनि छलफल हुने बताए । दलका नेताले बैठक आव्हान गरेमा हामी उपस्थित भएर आफ्नो कुराहरु राख्छौ उनले भने, समर्थन फिर्ताको विषय बैठकमै निर्णय हुन्छ ।
एमालेबाट शाही नेतृत्वको सरकारमा तीन जना मन्त्रीहरु सहभागी छन् । ति मध्येका एक मन्त्रीले दलको निर्णयलाई मान्नुको विकल्प नरहेको बताए । दलले समर्थन फिर्ताको निर्णय गरिसकेको छ, त्यसलाई ढिलो चाँडो मान्नैपर्छ ति मन्त्रीले भने, अबको दलको बैठक बस्नुअघिनै हामीले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ ।
संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले चाँडै दलको बैठक बस्ने बताए । ‘अहिले सबै माननीयहरुसँग छलफलमा छु, उनले भने, निकट भविश्यमै दलको बैठक बस्छ ।’ उनले चैत ५ गतेको मितिदेखि लागू हुने गरेर एमालेले मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेकाले त्यसको कार्यान्वयनतर्फ आफुहरुको ध्यान केन्द्रीत रहेको बताए ।
कर्णाली प्रदेशसभा ४० सदस्यीय छ । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एक हुँदा कर्णालीसहित सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले गरेको थियो । कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका २० र माओवादी केन्द्रका १३ सांसद छन् । यस्तै नेपाली कांग्रेसका छ जना र राप्रपाका एक सांसद छन् ।
Prevचर्चित सुन्दरी नायिका सुहाना थापाको फिदा बनाउने फिगर, २० तस्बिर सहित हेरौ !
Nextकिन आउछ शरीरमा मुसा, कसरी हटाउने ? सबै जानकारी